NextMapping | Sidee loo Joojiyaa Shakiga Keliya Goobta Shaqada
Sidee loo Joojiyaa Shakiga Keliya Goobta Shaqada
We ayaa sahamiyay kumanaan hogaamiye iyo caqabadaha ugu waaweyn ee la muujiyay:
Sida loo joojiyo shakiga goobta shaqada.
Xawaaraha qallafsan ee isbeddelka tikniyoolajiyada iyo ganacsiga ayaa adkaynaysa in shaqaalaha lagu mashquulo abuuritaanka mustaqbalka.
Shaqaalaha waxaa caqabad ku ah isbadalka socda mana aaminaan hogaamiyayaashooda ama jihada ganacsiga. Fikradaha sida nacaybka, cayda iyo 'halkan ayaan mar labaad ku noqonnaa' shaqaalaha ayaa hoos u dhigi kara dadaalka isbedelka ugu wanaagsan ee hogaaminta isbedelka wadista.
Sababaha ugu sarreeya ee shaqaaluhu ugu shakiyaan waa:
Waxay arkeen waxqabadyo bilaabanaya ka dibna luminaya uumi iyo sidaa darteed waxay noqdaan wax aan dan ka lahayn waxqabadka 'cusub'
Waxay arkeen hoggaamiyeyaashu inay iskudayaan inay iibiyaan isbadal weyn iyagoon ku lug yeelan shaqaalaha ama aysan weydiisan wax talo ah.
Waxaa loo sheegay in teknolojiyada cusub ay wax walba ka sii fiicnaan doonto.
Isbedelka ayaa lagu qasbay shaqaalaha iyada oo aan diiradda la saarin ku lug lahaanshaha shaqaalaha isbadelka hal ku saleysan.
Waxaa jira dhaqan aamin ah - shaqaaluhu waxay shaki ka qabaan in hogaamiyayaashu danahooda ka leeyihiin oo maskaxda lagu hayo.
Ma jirin diirada saarista tababarka iyo hagida shaqaalaha si loogu guuleysto isbedelka soo socda.
Xalalka shakiga laga qabo goobta shaqada waxay ku jirtaa hoggaan, beddel hoggaanka iyo abuurista dhaqanka goobta shaqada ku hawlan.
Waxaa jira qaybta cilmi nafsiga ciyaarta ciyaarta dhaqamada goobta shaqada. Dadku waxay ka jawaabi doonaan marka lagu daro, la waydiiyo fikrado iyo in la qiimeeyo.
Cynism iyo kala shaki ayaa ah wax soo saarka dadka dareemaya in qofna uusan dan ka lahayn.
Halkan waxaa ah furayaasha sida loo joojiyo shakiga goobta shaqada:
Maal gasho horumarka hogaaminta mustaqbalka ee diyaarka ah - ka caawi hogaamiyaasha in la kordhiyo asaga ama ayada tababbarka iyo xirfadaha latalinta si ay ula yeeshaan xiriir wanaagsan oo tayo leh xubnaha kooxda.
Ka go'antahay dhaqanka waxqabadka joogtada ah - deji filasho ah in waxqabadka lagu abaalmariyo. Tan macnaheedu waa in lala macaamilo shaqaalaha xunxun ee aan tooska ahayn ee leh filashooyinka cad isla markaana isaga ama iyada lagula xisaabtamo saameynta ay ku yeeshaan kooxaha.
Hayso wadahadal muhiim ah si joogto ah oo loo maro mid ka mid ah wadahadalada tababarayaasha. La hadal dadka shakiqaba madax-adayg oo diyaar u noqo inaad ka jawaabto oo ku taageerto shaqaalaha su'aalaha ama walaacyadooda.
Ugu yeer maroodiga qolka - kulan shirkadeed oo dhan oo ay ka mid noqon karaan shirarka qarsoodiga ah ee lagu qiro inuu jiro shaki iyo in la filayo. Markaa ka hadal waxa ka beddali doona markan iyo sababta isbeddelka u socon doono.
Ku hawl geli a 'Bedelka hoggaanka' taas oo macnaheedu yahay wadaagida aragtida halka aad u socoto, isdhaafsato oo xog aruuriso shaqaalaha, wadaag natiijooyinka xogta. Ku hawlgeli shaqaalaha inay gacan ka geystaan ​​abuurista qorshe ficil.
La wadaag warbixinnada horumarka usbuuc kasta. La wadaag Intranet-ka, fiidyowyada loogu diro dhammaan shaqaalaha e-mayl, dir dashbolo muujinaya sida wicitaanku ugu dhaqaaqay yoolalka isbeddelka.
U rogro kuwa kaa shakisan ee naysayer inaad u doodeto hoggaamiyeyaasha isbeddelka. Weydiiso kuwa shakiga qaba inay kaa caawiyaan inaad 'faafiso erayga' oo aad ku lug yeelato isbedelka adoo ku daraya mashaariicda labadaba caqabad ku noqon doona kuna dhiirrigelin doona.
Su’aasha aad isweydiinayso waa kan: “Shaqaalaheena miyay xaq u leeyihiin inay shaki ku jiraan marka loo fiiriyo taariikhdeena sida aan wax uga qabanay isbedelka?”
Haddii aad qirato inaad fahantay 'sababta' waxaa jira shaki waa markaa waxaad ku sameyn kartaa isbedelka ku joojinaya dariiqyadeeda. Siyaabo badan, qiimaha ay lahaan karaan shakigayaashu waa in ay sababi karaan in aan u eegno isbeddelada qaab aad u qiimeyn badan. Shakigu wuxuu kaloo bixiyaa aragti ka caawisa hoggaamiyaasha inay caddeeyaan oo xoojiyaan mudnaanta isbedelka.
Fadlan dooroCanadaUnited StatesAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia iyo HerzegovinaBotswanaBrazilBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileShiinahaColombiaComorosCongo, Democratic Republic of theCongo, Republic of theCosta RicaCôte d'IvoireCroatiaCubaCuracaoCyprusCzech RepublicDenmarkJabuutiDominikaDominican RepublicEast TimorEcuadorMasarEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaItoobiyaFaroe IslandsFijiFinlandFranceFaransiis PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGreeceGreenlandGrenadaGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandHindiyaIndonesiaIiraanCiraaqIrelandIsraa'iilItalyJamaicaJapanUrdunKazakhstanKenyaKiribatiKuuriyada waqooyiSouth KoreaKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLubnaanLesothoLiberiaLiibiyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaIslands MarshallMauritaniaMauritiusMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorthern Mariana IslandsNorwayCumaanPakistanPalauPalestine, State ofPanamaPapua New GuineaParaguayPeruFilibiinPolandPortugalPuerto RicoQadarRomaniaRussiaRwandaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint Vincent iyo Grenadines ahSamoaSan MarinoSao Tomé iyo PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaJasiiradaha SolomonSoomaaliyaKoonfur AfrikaSpainSri LankaSudanSudan, KoonfurtaSurinameSwazilandIswidhanSwitzerlandSuuriyaTaiwanTajikistanTansaaniyaThailandTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesBoqortooyada IngiriiskaUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, USYemenZambiaZimbabwe